Imwe Phase Induction Motor Mutengo & yekutengesa mhando mhangura kana aluminium
Imwe chikamu induction mota pamutengo wakanaka wekutengesa
Imwe Danho reMutengo Wemotokari, Vakawanda & Vatengesi
General chinangwa AC induction motors
Yakanyanya mutengo mumwechete chikamu chechipiri-capacitor induction mota
Yepasi Pasi Induction Motors
Mhando dzakasiyana-siyana dzeimwechete yekutanga induction mota sarudzo
Kune akati wandei akasiyana marudzi eimwe-chikamu motors. Iyo imwechete Phase Induction mota ine imwechete chikamu ichitenderera iyo yakaiswa pane stator yemota uye keji inotenderera inoiswa pane iyo rotor. Iyo Split Phase mota inozivikanwawo seResistance Start Motor. Crompton Greaves 1 HP 0.75 kW 2 Pole Flange yakakwira Capacitor Kutanga Induction Run AC Induction Motor
Isu tinopa mhando yepamusoro, zvigadzirwa zvemutengo wakaderera. Iyo shaded-pole mota ndiyo yepakutanga mhando ye AC imwechete-chikamu induction mota. Zvikamu zvekudzora zvinotanga kuburitsa mota Laminated stator yakakosha.
Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kutibata isu, isu tichava vanofara kukubatsira iwe! Yedu vatengi vatengi inowanikwa 24 maawa online. Kana isu tichipa zvigadzirwa zvakanaka, tichaita basa redu rebasa.
Isu tine timu yakasimba, timu yekutsvagisa ine tsvagurudzo yakanaka, uye yakanaka mushure mekutengesa timu.Iye capacitor-kutanga induction-inomhanya mota inogadzira iri nani kutenderera magineti munda kupfuura iyo split-phase motors.
Isu Feature Zvigadzirwa
Kune matatu marudzi emhando imwechete yekusimudzira motors
Kuparadzanisa Horsepower induction mota
Iyo imwechete Phase Induction mota ine imwechete chikamu chinotenderera iyo yakaiswa pane stator yemota uye keji inotenderera inoiswa pane iyo rotor. 5kw imwechete chikamu mota Seiko mhando, izvo zvigadzirwa zvinotengeswa ese ese mairi emhangura, yakadzika tembiricha inomuka, hupenyu hwakareba; 2hp 240v yemagetsi imwechete chikamu mota yakakwira chaiyo rotor, diki jitter, kugadzikana kushanda; yakakwira dhijitari chaiyo mabheyaringi, pfeka nemishonga, ac induction mota, 1 hp imwechete chikamu induction mota mutengo, ye1hp imwechete chikamu mota mutengo, Tora yakanakisa dhizaina yeAsi Phase Induction / Asynchronous General Chinangwa Industrial Electric Motors kubva kuChina famours Sogears Boka. Variable Speed ​​Drives, Yakakwana, Global Standard AC Gear Motors.
Nyowani HP Magetsi Magetsi 2C Imwe Chikamu TEFC 56/115 Volt 230 RPM. single phase induction mota ine aluminium inopesana nemhangura stator, Tenga yakaderera mutengo, yakakwira mhando imwecheteyo motor mota nekutakura kwepasirese KUTORA NER GROUP. Kunze kwenyika yeOne Phase AC Induction mota - 3450W-90W Vatatu / kamwechete Chikamu AC Induction Motors, Imwe Danho reMota neRudyi Angle Gear Box, 120W Chitatu Chekutanga AC Helical Inline Geared Motor.
Kamwe-chikamu AC yakagadzirirwa mota
Kune matatu matatu eimwe chikamu chikamu induction motors. Iyo Split Phase mota inozivikanwawo seResistance Start Motor. A Capacitor Start Motors idanho rimwe Induction mota iyo inoshandisa capacitor mudunhu rekubatsira kutenderera kuti ibudise chikamu chakakura musiyano uripo pakati pazvino mune yakakurisa uye yekubatsira mamhepo.
0.5 hp yakagadzirirwa motokari, imwe nhanho mota ine kudzikisa gearbox, ac giya mota nekumhanyisa kutonga, ac giya mota 100 rpm, 1/2 hp giya mota mutengo, imwechete chikamu induction mota ine gearbox, 1/2 hp dc giya mota, imwechete chikamu mota ine gearbox. AC induction motors akakodzera kune eunion-inotungamira uye inoenderera mashandiro senge conveyor system. 1/2 HP High Power Imwe-Phase AC Gear Motors anowanikwa mune akasiyana siyana ma torque anotangira pa15 kusvika 627 mu-lbs mune ese ari maviri kona uye yakafanana shaft dhizaini inoratidzira kugona kwakanyanya kubva kune hypoid kana helical magiya uchipa yakakura torque kuburitsa kune yakakura huwandu hwekushandisa.
AC giya mota ine kukurumidza kumhanya
Iyo Capacitor Kutanga Motors idanho rimwe Induction mota. Iyo stator yekuparadzanisa-chikamu induction mota inopihwa neyekutanga ichitenderera. Chikamu chekupatsanura kana chimwe-chikamu chetatu-waya system rudzi rweimwe-chikamu chikamu magetsi emagetsi kugovera.Single-chikamu induction motors anoshandiswa zvakanyanya kune madiki mutoro.
Iwo kutonga kwakanakira kumira-wega AC gearmotor zvinoshandiswa zvinoda kumhanyisa kumhanya, inodzorwa kumhanyisa uye kudzosera kumashure. AC Speed ​​Kudzora Motors kubva 6w kusvika 120w, yakasimba simba Parallel Shaft yakagadzirirwa mota, Speed ​​Controller 110V 120W ye AC Gear mota, iyi renji ndeye chete inowanikwa muChikamu Chete, inomhanya chinogadziriswa nePWM (Pulse Width Modulating) controller. Electromagnetic Brake mhando yekumira mashandiro kana yakajairwa round shaft.
Isu tinotora mhando sekushandisa kwedu uye mutengo wakaderera ndiko kutendeseka.